အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, pictures, ratings, reviews and discusssions
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5898)
နေအိမ် →မော်ကွန်းတိုက် tag ကို "အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic"
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 20 Jun 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2012 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမှောင်မြင်း Killer ဂန္ထဝင်သံသရာ ~ motorboxer
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 11 Jun 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ပထမဦးဆုံးအစီးနင်: 2014 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic, စပျစ်သီးနှင့်မင်းတို့ကလည်း – Cycle News
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 11 Jun 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် The Indian Motorcycle Returns in All Its Glory – WSJ.com
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် |7Jun 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2014 Indian Chief Classic motorcycle review by Top Speed India
2014 Indian Chief Classic Specifications: ခုနှစ်: 2014 Model: Chief price: 265000 INR Transmission:6speed Torque @ RPM: 138 @ 2600 displacement: 1811 cc Filed under: We always have considered Harley Davidson as the original American motorcycle manufacturer brand but there is one more motorcycle manufacturer who is equally famous not only in the American Market but internationally as well. The Indian motorcycles started their journey way back in the year 1901, initially they were called Hendee Manufacturing Company but later it was changed to Indian Motorcycle Manufacturing Company. Now in the recent years Indian bike enthusiast have witnessed many International2wheeler manufacturer launched ...
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 30 မေ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် နယူး 2014 Indian Chief and Chieftain Review From Sturgis
Indian Summer Straight from Sturgis, our latest take on the 2014 Indian Chief cruisers and Chieftain bagger. ဓာတ်ပုံဆရာ. Barry Hathaway and Tom Riles Much of what one sees at Sturgis Bike Week falls in the “OMG, I wish I hadn’t seen that!” category. But it’s not just swinging boobs, lumpy bums and sunburned beer bellies that hog up the scene in South Dakota. The show-off bikes rolling around the High Plains can also be unsightly. Thirty-inch front wheels, anyone? But this year, thank God and America, there was one double take well worth the head turn: the unveiling of the long-awaited Chiefs from Indian Motorcycles. One Little, Two Little, Three Little Indians… Everyone knew ...
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 22 မေ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် How to Replace the Rear Drive Belt on Indian Motorcycles eHow
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 22 မေ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2014 Indian Chief Classic Looks to Dominate Harley-Davidson – DailyFinance
2014 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic: MD စီးနင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း …
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 22 မေ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2014 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic: MD စီးနင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း …
2014 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic: MD Ride Review After spending several days riding the three new Indian Chief models in Sturgis at the product launch (which we reported on here ), we asked Indian if we could haveaChief Classic for an evaluation here in Southern California on familiar roads. Obviously, our report from the Sturgis launch was very positive with regard to all three models, including the Classic, Vintage (soft bags) and Chieftain (hard bagger with integrated fairing and stereo). All three bikes share the same engine and chassis (although the Chieftain has slightly different steering geometry). We chose to further test the Classic, which is the essence of the new Indian. We won’t ...
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 17 မေ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် US Road Trip on an Indian Chief
2014 Indian Chief Classic Specs, စျေးနှုန်းနှင့်ရုပ်ပုံ 2014 2015 မော်တော်ဆိုင်ကယ်
အခုလည်း: အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် | 16 မေ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2014 Indian Chief Classic Specs, စျေးနှုန်းနှင့်ရုပ်ပုံ 2014 2015 မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဆူဇူကီး AN 650 Ducati Diavel တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် Ducati 60 ဟွန်ဒါ DN-01 Aprilia Mana 850 စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး Brammo Enertia ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် စမတ် eScooter KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး Colleda CO သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Bajaj Discover အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Ducati Desmosedici GP11 ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ER-6n မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Moto Guzzi 1000 Daytona Injection